စာဖတ်သူ၏ အမြင် | Layma's World
Filed under: Thinkings from novels |
« ပျောက်တယ်….ပြင်တယ်…..ကောင်းသွားတယ်… အဆုံးမသတ်တတ်တဲ့ ကဗျာ »
ဂျစ်တူး - gyit_tu, on August 20, 2007 at 4:55 pm said:
ဂျူးရဲ့ အရေးအသားတွေဟာ ဗမာ culture နဲ့ ကြည့်ရင် ၊ အတော်လေး ကွဲပြားနေတယ် ။ အဲဒီအချက်ကြောင့်ပဲ သူ့ ကိုကြိုက်တယ် ။ နောက်တချက်က.. သူရေးသမျှတွေမှာ နောက်ခံဇာတ်လမ်းတွက် နယ်မြေဒေသ ပတ်သက်ရာအကြောင်း သေချာ သုတေသနလုပ်ပြီး ရေးတာကို ကြိုက်တယ် ။
အမှတ်တရကို မဖတ်ဖူးဘူး ။ အတော်စိတ်ဝင်စားတယ် ။
Layma, on August 22, 2007 at 9:09 am said:
မဂျစ်…. မမ နဲ့လေးမ အယူအဆချင်းတူတူပဲ…. မဂျစ် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာနဲ့အမှတ်တရကို တအုပ်လုံး ရိုက်ပြီးတင်ပေးချင်လိုက်တာ…. ဒါပေမဲ့ ပျင်းတယ်…ခွင့်လွှတ်နော်….။
ဂျစ်တူး - gyit_tu, on August 22, 2007 at 3:47 pm said:
တင်ပေးချင်တယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်ကွယ်း)
Layma, on August 24, 2007 at 1:24 am said:
ဟိ..ဟိ… မဂျစ် ကျေနပ်သွားပြီ… မုန့် စားရတော့မယ်ကွ….